အင်္ဂလန်၏ ငွေဖောင်းပွမှုဆိုင်ရာ ဒေတာကို ဂျူလိုင်လ ၁၈ရက်နေ့ ၁၁:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့်လည်း ငွေကြေးမူဝါဒတွေ မချမှတ်သေးခင်မှာအရေးပါသည့် ဤ ဒေတာကို အလေးထားစောင့်ကြည့်လေ့ရှိပါသည်.
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတင်တော့ ဗဟိုဘဏ် အကြီးအကဲအချို့ အနေနှင့် ငွေဖောင်းပွမှု မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတက်လာခြင်းကို အရှိန်လျော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အတိုးနှုန်းတိုးရန်အတွက် ဆန္ဒရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါသည်. ပြီးခဲ့သည့်လ ငွေဖောင်းပွမှုများ လျှင်လျှင်မြန်မြန်နှင့် အားကောင်းခဲ့သည့်အတွက် ယခုအခါ မျှော်မှန်းနှုန်းထားအထိ ရောက်ရှိလာနေပြီ ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်ပင် ယခုထွက်ရှိမည့် ဒေတာသည် GBPတန်ဖိုးအတွက် အလွန်အရေးကြီးနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်. ဒေတာအားကောင်းပါက စားသုံးသူများ၏ တန်ဖိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်နေသည့် ထရိတ်ဒါအများစု၏ ပေါင်စတာလင်ငွေကြေးအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ် များလာမှာဖြစ်တာကြောင့် ပေါင်တန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါသည်. ဒေတာ အားပျော့ခဲ့ပါက ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေ နည်းသွားမှာ ဖြစ်သောကြောင့် ပေါင်စတာလင်အပေါ် ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်.